War Deg Dega:Iska Hor Imaad Dhex Maray Ciidanka Qaranka Somaliland Ee Jiida Hore,Iyo Deegaano Cusub Oo Ay Ka Qabsadeen Kooxaha Nabad Diidka Ah+Tirada Dhimashada Iyo Dhaawaca - Wargane News
Home Somali News War Deg Dega:Iska Hor Imaad Dhex Maray Ciidanka Qaranka Somaliland Ee Jiida...
Wararka Naga Soo Gaadhaya Gobolka Sool Ayaa Sheegaya In Ciidamada Qatanka Somaliland Ku Ruqaansadeen degaanada hawdka Ay Ku Dhuumaalaystaan Maleeshiyaadka Kooxda Uu Hogaamiyo Garaad Garaad Jaamac Garaad Cali, Waxaana Ciidamada Somaliland Ay Gaadheen Deegaano Hoos Yimaada Gobolka Sool Iyo Buuhoodle Halkaas Oo Ay Ku Sugnaayeen Qaar Ka Mida Kooxaha Nabad Diidka Ag
Wararka naga soo gaadhaya ayaa tilmaamaya inay Ciidanka Somaliland oo maalmahanba isku urursanayey tuulada Dabataag iyo agagaarkeedu ay guluf ku galeen degmooyinka Dharkayn iyo Saaxdheer iyo kaamamka ku soo aroora.Ciidanka Khaatumo
Ma jiro wax war ah oo rasmi ah oo laga soo saaray sida ay wax u dhaceen iyo halka ay hadda wax marayaan, haseyeeshee ilo ku dhowdhow oo ayBurcoonline.com waraysatay waxay tibaaxeen in dagaal fool-ka-fool ahi kala kulmay ciidankaasi markii ay ku soo dhowaadeen degmada Dharkayn Wararku waxay intaasi raaciyeen in dagaalkaasi ay ku naf waayeen ugu yaraanhal qof oo ka mid ahaadableyda degaanka, halka ay dhinaca ciidamada Somalilandna Ay ku dhinteen ugu yaraanlaba  askari. Dhaawaca labada dhinac ayaa lagu sheegay inuu ugu yaraan yahay saddex  ruux.
Saddexda qof ee hawlgakan ku qudh baxay ayaa meydadkoodii loo soo qaaday dhanka Laascaanood si loogu aaso. Xaaladda Dharkayn ayaa weli qasan iyadoo rasaas goosgoos ah laga maqlayey magaalada gudeheeda. Habeenkii Xalay
Dhanka kale, Ciidanka Somaliland ayaa ku waaberiistey saldhiggagaraad jaamac garaad cali Saaxdheer, halkaasi oo la sheegay inaanay wax iska hor imaad ahi ka dhicin. Wararku waxay sheegayaan inGaraad Jaamac Garaad Cali ku maqanyahay dhanka dalka Imaaraadka, Dubai. Lama garanayo halka ay ku dambeeyeen ciidamadii iyo hubkii lagu ogaa degmada Saaxdheer, balse ma jiro wax war ah oo muujinaya inay dagaalameen ama gacanta lagu dhigay.